Wakiilka cusub ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo xilka la wareegay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Wakiilka cusub ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo xilka la wareegay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wakiilka cusub ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo xilka la wareegay
Danjiraha cusub ee Midowga Afrika wakiilka uga noqon doona Soomaaliya Francisco Caetano Jose Madeira ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka xafiiska ergayga Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya.
Wakiilkan oo hogaamin doona howlgalka AMISOM, isagoo uu xilka kala wareegay ergaygii hore Ambassador Maman Sambo Sidikou uu xiligiisii uu dhammaaday.
“Waxaan xilkan la wareegay xaalad adag ee taariikhda Soomaaliya, xili dalku isu diyaarinayo doorashooyinka sanadka danbe, waxaan muhiimad siinayaa in aan xaqiijino anaga iyo ciidanka Soomaaliya xaaladdana ka dhigno mid degan iyo dhismaha qaranka..” ayuu yiri Danjire Madeira.
Wakiilka cusub ee Midowga Afrika ayaa u dhashay dalka Mozambique, wuxuuna ka soo shaqeeyey dalka Aljeeriya isaga oo Midowga Afrika u ahaa danjire, sidoo kale waxa hore u noqday danjiraha dalkiisa Mozambique u fadhiya dalal badan oo Afrikaan ah.
Previous articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo socdaal aanu qorsheysan uga dhoofay Magaalada Muqdisho
Next articleDAAWO SAWIRRO: Kulamadii maanta ka dhacay Gaalkacyo ee Guuleed iyo Gaas